Hatramin'ny fahazazana, ny ankizilahy sy ankizivavy tsy misy tombotso miafina dia mijery ny papa sy ny mamany izay mitondra fiara na moto. Na dia zaza iray taona monja aza dia te hanao zavatra "mitarika". Ho fanatanterahana izany faniriana izany, ny mpanamboatra ny vokatra ho an'ny ankizy dia nahazo kilalao maro samihafa: scooters, bisikilety, milina-tsokosoko, sns., Izay tsy vitan'ny hoe entanin'ny zazakely mandritra ny fotoana lava, fa koa manofana azy amin'ny fandrindrana hetsika. Ny fitaterana ny ankizy dia azo zaraina ho sokajin-taona maro, mba hahafahan'ireo ray aman-dreny hividy an'ireny kilalao mahafinaritra ireny rehefa mividy kilalao mahafinaritra.
Fivarotana an-jatony amin'ny ankizy hatramin'ny 1 taona
Mazava ho azy, voalohany indrindra eto amin'ity sokajy ity dia fiara-tolokary. Ireo kilalao ireo dia miasa amin'io fitsipika io: ny ankizy dia manosika ny tongony amin'ny tanany, ka manatsara ny fiara. Tonga amin'ny fanovana samihafa sy ny bundles ny Clippers, saingy, amin'ny fitsipika, misy ny fitsipika napetraky ny modely rehetra:
trunk for things;
ny kodiarana amin'ny "peeple";
ny fisian'ny valin'ny lamosina avo lenta;
miaro ny fiarovana - mijanona eo an-damosina sy eo aloha, ka tsy milentika ilay milina ary tsy mianjera ny zaza.
Ankoatr'izany, amin'ny kilalao sarobidy kokoa, dia afaka mahita tranokala manana hakingana sy feo ianao, izay tena malaza amin'ny ankizy.
Ankoatr'izany, misy ny modely manerantany amin'ny milina toy izany izay manao ny karazana "karazan'ady". Manana rantsam-batana izy ireo, toerana azo alaina ho an'ny tongotra sy ny fiterahana mba tsy hahafahan'ilay zaza tsy hivoaka ny milina fanoratana.
Ireo modely manan-danja ireo dia misy ihany koa amin'ny bisikileta. Izy ireo, toy ny milina, dia manana fitaovana ho an'ny ray aman-dreny, fialofana, fiarovana, sns., Izay ahafahana mampiasa azy ireo na dia ho an'ny ankizy iray taona aza.
Ny fividianana entana toy izany dia tena mahasoa, satria Rehefa mihalehibe kely ny zazakely, dia azo esorina daholo ireo fitaovana ireo, ka ahodiny ho toy ny kodiarana telo.
Fandevenana an-jatony amin'ny ankizy hatramin'ny 2 taona
Modely bisikilety manerantany, natao ho an'ny zazakely sy amin'izao vanim-potoana izao. Na izany na tsy izany, na dia eo aza ny fanamarihan'ny mpanamboatra maro fa efa afaka mamely ny tenany ny ankizy, raha ny zava-misy, araka ny fitateran'ny traikefa dia faly ireo ankizy mitaingina bisikileta, tsy misy afa-tsy ny fandanian'ny ray aman-dreniny. Na izany aza, na aiza na aiza dia misy ny tranga manokana, ary raha manontany ny bisikileta iray ny carapace, dia manolotra karazana karazana toy izany ny tsena.
Ny fiara elektrônika ho an'ny ankizy dia heverina ho fitaovam-pianakaviana tiany indrindra amin'ny tanora. Ny modely dia misy tariby marevaka sy lelam-peo, pedals ary kodiarana ho an'ny fanaraha-maso mahaleotena, izay ahafahan'ny ankizy mampiakatra haingana haingana hatramin'ny 4.5 km / h. Ankoatr'izay, ny kitapo dia manana rafitra fanaraha-maso hanitsy ny hetsika amin'ny fiara amin'ny olon-dehibe.
Ny ankizy amin'izao vanim-potoana izao koa dia liana amin'ny scooters. Ankehitriny dia misy karazany samihafa karazana ary na dia misy kodiarana telo aza miaraka amin'ny tolokara na runovela. Izy ireo dia manana seza manokana, izay, raha ilaina, azo esorina, ary ny zazakely dia afaka mamantana scooter mijoro.
Fitaterana an-jatony amin'ny ankizy 3 taona
Ny fitaovana vao haingana indrindra amin'ny fikarakarana ny ankizy dia fialonana, na bisikileta tsy misy pedals. Na dia tsy hita matetika eny an-dalambe aza izy fa isan-taona dia manana mpankafy azy hatrany izy. Tsotra ny mandeha amin'ny dia ary toy ny mpanafaingana tsara ho an'ireo te-hianatra ny fomba fitondrana bisikileta roapolo.
Mody fialam-boly mendrika ny môtô trondro . Amin'izao vanim-potoana izao, modely misy kodiarana telo-dàlana, izay afaka manatratra haingana amin'ny 3 km / h. Amin'ny ankapobeny, ny môtô rehetra dia ahafahana miresaka amin'ny miresaka aoriana, ary manana jiro ihany koa.
Fiarandalamby ho an'ny ankizy
Tsy misy ririnina, tsy manao izany raha tsy mahazatra ny olona rehetra ary tia hatramin'ny fahazazana amin'ny fitaterana an-jatony, toy ny sambon-danitra. Ary raha vao haingana dia azo atao ny mahita modely raha tsy misy tadin-doha fotsiny, amin'izao fotoana izao dia misy tsatoka misy fefy izay mifatotra avy any aoriana. Indrindra fa tsara ho an'ireo ankizy izay zatra mitaingina seza misy kodiarana. Raha fehezina, raha nesorina dia nesorina ilay tohatra, ary nanjary modely ara-dalàna ny sompitra.
Raha fintinina, te-hanamarika aho fa ny fitaterana aloa amin'ny taona dia hitondra hafaliana be ho an'ny ankizy, ary manana fihetseham-po be dia be ny ray aman-dreny.
Synthesizer ho an'ny ankizy
Fitaovam-piadiana avy amin'ny tariby
Zanak'i Will Smith
Sakafo ho an'ny poizina amin'ny ankizy
Misarika ny fasika eny ambony fitaratra
Fivoriana ray aman-dreny ao amin'ny vondron'olona midadasika ao amin'ny akanin-jaza
Fanabeazana ataon'ny tanindrazana
Baby shampoo - ahoana no fomba hifidianana ny vokatra tsara indrindra ho an'ny volon'ny zanakao?
Ahoana ny amin'ny kapital'ny reny?
Salady dandelion - tsara sy ratsy
Ny sombiny bitika amin'ny saka
Rahoviana no omeko ny atiny ny atiny?
Ampahany amin'ny fako amin'ny vodka
Inona no karatra mahay?
Potom-boaloboka niaraka tamin'ny akoho
Tao amin'ny fiainan'i Amber Heard no niseho lehilahy vaovao
Natalie Portman, ilay renim-pianakaviana, dia nitantara ny fiheverany ny zaza ho an'ny zaza
Tori Spelling miandry ny zaza fahadimy
Bezdozhezhevoe koba ho an'ny patties ao anaty lafaoro
Ny masoko manindrona - mora ve ny miatrika savorovoro?
Ahoana no hanokafana salon kanto sy ny fomba hitantanana izany raharaham-barotra izany?
Toe-borosoana ho an'ny tarehy
Anemia 1 degre
Tsara be nandritra ny fitondrana vohoka